Emere Nubia Red Magic 3 na Mee 27 na Spain | Androidsis
Nubia Red Magic 3 nwere ụbọchị ntọhapụ
Egwuregwu mobiles bụ akụkụ na-eto eto. Ha abụrụla ahịa nanị ihe karịrị otu afọ, mana ruo ugbu a a nabatara ha nke ọma. Ya mere, anyị na-ahụ na ọtụtụ ụdị na-eweta ụdị nke ha. Otu n'ime ha bụ Nubia, nke mere n'oge na-adịbeghị anya hapụrụ anyị Nubia Red Magic 3, nke anyị na-agwa gị ihe niile. Ekwentị dị ike kara aka iduzi nke a.
Mgbe o gosipụtara ya, anyị amatalarị na ụdị a ga-akụ ụlọ ahịa n'oge na-adịghị anya. Ugbu a, anyị amaraworị ụbọchị mgbe nke a Nubia Red Magic 3 na-aga ịmalite na Spain na ọkwa. Enweela ozi a. Luckily, anyị agaghị echere ogologo oge.
Nwere mmasị ịzụrụ Nubia Red Magic 3? A ga-ewepụta ya na Spain na May 27. Ọ bụ ezie na eziokwu bụ na a na-arụ ọrụ ya n'ọtụtụ ahịa, dịka ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara. Enwere ike ịzụta ama a na Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Holland, Poland, Portugal, Romania , Slovakia, Slovenia, Sweden na United Kingdom, tinyekwara na Spain.
Maka ugbu a anyị enweghị data na ọnụahịa nke ekwentị a ga-enwe na mbido ya. Onweghị ihe dị na web banyere ọnụahịa gọọmentị ya, yabụ anyị ga-echere ịmatakwu na nke a. Ma anyị ekwesịghị ichere ogologo oge tupu anyị achọpụta.
Nubia Red Magic 3 bụ ezigbo nhọrọ na ngalaba egwuregwu a. Ọzọkwa, ọnụahịa dị oke ọnụ ala na-atụ anya n'aka gị. Yabụ na ọ nwere ike ịbụ ekwentị ga - enye ọtụtụ ihe ị ga - ekwu n’ahịa. Ike, zuru oke maka egwuregwu, na ezigbo batrị na ezigbo ọnụahịa.
Na mgbakwunye, a na-atụ anya na a ga-enwe mgbasa ozi nkwado na mmemme nke mmalite ya. Ebe m maara ha ga-enwe ike iji onyinye zụrụ onyinye nke a Nubia Red Ime Anwansi 3. Ọ bụ ezie na ugbu a anyị amaghị ihe onyinye ga-abụ ndị anyị nwere ike iji ekwentị a. Anyị kwesịrị ịnwe data niile n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nubia Red Magic 3 nwere ụbọchị ntọhapụ
ASUS Zenfone 6: Akara ohuru ohuru
Ihe eji eme ihe eji eme ihe nke oma na Evolution 2: Agha maka Utopia